पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा
पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय March 30, 2016	0 422 Views
नेपाली पत्रकारहरुको पेशागत साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले भर्खरै स्थापना दिवस मनायो । २०१२ चैत १६ गते स्थापना भएको महासंघ ६१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६१ वर्षमा नेपाल पत्रकार महासंघले नागरिक अधिकारका सन्दर्भमा, पत्रकारिताको विकास, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहादा आम नागरिकको आशा अनि भरोसाको केन्द्रको रुपमा सदैव पत्रकार महासंघ रहिआएको छ । पत्रकारिताका हिसाबले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्दै निरन्तर नागरिक अधिकारको पक्षमा विगतमा यसले निर्बाह गरेको भूमिकाका कारण पनि महासंघप्रति आम नागरिकको त्यस्तो अपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो । यो विश्वासमा खरो उत्रनु महासंघ र यसका सदस्य पत्रकारहरुको एक किसिमको निरन्तरको परीक्षा पनि हो । परीक्षामा पास हुन सके मात्रै पत्रकारका नाताले हामी स्वयंले दाबी गर्दै आएको हामीले नै निर्बाह गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा हुन्छ ।
स्थापनाको यति लामो समय बिते पनि खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै पत्रकारिता क्षेत्रको विकास भयो भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमहरु थपिने क्रममा निकै बढोत्तरी भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर १० हजार ७७ पत्रकार छन् । छापा, रेडियो र टेलिभिजन हुादै अनलाइनसम्म आइपुग्दा यसको क्षेत्र निकै व्यापक भएको छ । अझ सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले सञ्चारलाई व्यापक बनाइदिएको छ । यी सबै उपलब्धिसागै पत्रकार र पत्रकारितासाग जोडिएका समस्याहरु पनि छन् । पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको चुनौती छादैछ । आमरुपमा मौलाएको दण्डहीनताले पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । महासंघकै अनुगमन इकाईका अनुसार बितेको एक वर्षमा एक सय २६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना भएका छन् । त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुादा श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा नाजुक छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २०७० सालको तथ्यांकअनुसार ४३ प्रतिशत पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन् । यी मध्ये पनि ४० प्रतिशतले नियमित पाउादैनन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकारहरुको पेशागत संस्था हो । पेशागत संस्थाको मुख्य दायित्व भनेको आफ्ना सदस्यहरुको अधिकारलाई संरक्षण गर्न अभिभावकको भूमिका निर्बाह गर्नु हो । तर हामीकहाा श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा कहिल्यै नटुङ्गिने मुद्दाका रुपमा रहिआएका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको तलब स्केल तोकेर कानून बनाउने काम भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । महासंघले ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका जटिलतामा सूक्ष्म अध्ययनका साथ काम गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै महासंघले सदस्यता शुद्धिकरण, विधानको पूर्ण पालनामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नियमविपरीत भइरहेका कामहरु बिरुद्ध कलम चलाउने पत्रकार र पत्रकारका संस्था स्वयंले यी कुरामा ध्यान नदिने हो भने उनीहरुले लेखेका, बोलेका कुराहरु कसले पत्याउने ? फेरि पनि आफैले आफ्नो विधान विपरीत काम गर्ने हो भने पत्रकारको हैसियतले अरुलाई प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत कसरी कायम गर्ने ? यी निकै गम्भीर प्रश्न हुन् । त्यस्तै महासंघलाई राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्नबाट जोगाउने पनि अब गर्नुपर्ने काम हुन् । पत्रकारहरु दलीय घेराभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक मर्यादामा रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउने काम महासंघले गर्नुपर्छ ।
पत्रकार महासंघ पत्रकारहरुको पेशागत संस्था हुादाहुादै पनि यसका केही सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छन् । यसले निर्बाह गर्ने भूमिकामा नागरिकको सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक पनि जोडिएका छन् । समाजका आवाजविहीनको आवाजलाई बाहिर ल्याउने माध्यम बनेर पत्रकारले समाजको ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व समेत गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धिका काममा महासंघले ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्दै नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने दायित्वलाई जिम्मेवारीका साथ निर्बाह गर्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको ६१ वर्षको इतिहासमा यसले निर्बाह गरेका ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या, नागरिक अधिकारका पक्षमा संस्था र पत्रकारिताका माध्यमबाट निरन्तर लाग्नुपर्छ । दलीय पक्षधरताभन्दा माथि उठेर गरिने पत्रकारिताले मात्रै वास्तवमा देश, जनता र स्वयं पत्रकारिताको गरिमालाई जोगाउन सक्छ ।
Previous: देश र व्यवस्था मात्र किन असफल ?
Next: मगन्तेको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ